လူရည်ချွန် | Radio Veritas Asia
ဒီနေ့မှာ ကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေ အတုယူအားကျနိုင်ဖို့ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့၊ အ.ထ.က (၂)က နဝမတန်း ကျောင်းသား ၂ ယောက်တို့ရဲ့ ပညာသင်နှစ် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မှာ လူရည်ချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို ကျွန်မကိုယ်တိုင် သွားရောက်မေးမြန်း ခဲ့ပုံကို တဆင့်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ဆုံးတင်ပြရမယ်ဆိုရင် နမ္မတူမြို့ဆိုတာ ရှမ်းလူမျိုးခွဲထွက်ရေး၊ ပလောင်ခွဲထွက်ရေး အဖွဲ့တွေနဲ့ တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေတာ နှစ်ပေါင်း ၅၀ မကတော့ပါဘူး။ မြို့က မအေးချမ်းပါဘူး။ တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းတွေမှာလည်း တိုက်ပွဲရှောင်တွေ အများကြီးရှိလို့ နေတာပါ။
ဒီလိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားကမှ ထူးထူးခြားခြား ကျောင်းတစ်ကျောင်းတည်းက လူရည်ချွန် ၂ ဦးပေါ်ထွက်ခဲ့တာပါ။ တစ်ဦး က စိုင်းခွန်ဆိုင်ဖ နဲ့ နောက်တစ်ဦးက မသန်းသန်းအေး တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခုနဝမတန်း လူရည်ချွန်ရရှိခဲ့တဲ့ မသန်းသန်းအေးနဲ့ ကျွန်မကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာကို ပြန်ပြီးမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ မသန်းသန်းအေးက အခုလိုကြိုးစားခဲ့ပုံကို ပြောပြပါတယ်။
အခုနမ္မတူမြို့ဂုဏ်ဆောင်လူရည်ချွန်တယောက်အနေနဲ့ ဘာတွေကြိုးစားခဲ့သလဲ။ ဘယ်လိုရင်းနှီးခဲ့ရသလဲ။ အန်တီတို့ အသံလွှင့် ဌာနကို ကျေးဇူးပြု၍ တင်ပြပေးပါ။
ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ ပထမဆုံးမိခင်ရဲ့ သင်ကြားပေးမှု မိခင်အမည်က ဒေါ်စုရီပါ။ အခုလိုပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်း ဝမ်းသာမိပါတယ်။
ရှေးဦးစွာ သမီးငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘတွေရဲ့ တွန်းအားပေးမှု၊ တိုက်တွန်းမှုတွေရဲ့ စာတွေကိုဖတ်ချင်၊ ကျက်ချင်လာအောင် တွန်းအားပေးခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဒီနှစ် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲမှာလဲ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တာ (ပ)ဆုရခဲ့ပါတယ်။ (၈)တန်းမှာတုန်းကလည်း လူရည်ချွန် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မရခဲ့ပါဘူး။ အခု ၂၀၁၈(၉)တန်းမှာမှ လူရည်ချွန်ရရှိခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို ရရှိဖို့ဆိုတာ ကြိုးစားမှုတွေအများကြီး လိုပါတယ်။ အဲဒီလိုရရှိဖို့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေရဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးတွေရဲ့ သွန်သင်မှုတွေလဲ ပါပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အတန်းပိုင် ဆရာမ ဒေါ်သန်းမြင့်အေး၊ ကာယဆရာမ ဒေါ်စောမေ၊ မြန်မာစာဆရာမ ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ရွှေတို့ရဲ့ ဗဟုသုတတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြောပြပါတယ်။
အားကစားအနေနဲ့ အပြေးလေ့ကျင့်မှု မီတာ ၁၀၀ ဘောင်တွင်း အနက် ၅ နာရီမှာ “ညဉ် မနက် ဘောလုံးကွင်းမှာ ၂ ပတ် ၃ ပတ် အပြေးလေ့ကျင့်ပါတယ်။” အိပ်မထတင် ဆရာမ ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် စံချိန်နဲ့ ကိုက်အောင် အချိန်ကိုက်အောင် training ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာမကြီးကလည်း ကျောင်းစာကြည့်တိုက်မှာ ရှိတဲ့ စာအုပ်တွေပေးပါတယ်။
အဲဒီလို ဆရာမကြီးနဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိအောင် လုပ်ပေးလို့ ဒီကနေ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခုလို နမ္မတူ-ဘော်တွင်းအသင်း(ရန်ကုန်)ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အခုလိုကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ ကာယအား၊ ဉာဏအားကို သမီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကကော ဘယ်လိုပံ့ပိုးပေးသလဲ?
ကာယနဲ့ ပတ်သက်လို့ အတွဲ ၁၊ ၂၊ ၃၊ တို့ကို လေ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်။ မရရအောင် စံချိန်နဲ့ ကိုက်အောင် လေ့ကျင့်လာခဲ့တယ်။
ဗဟုသုတအနေနဲ့ သုတစာပေတွေကို ပေးဖတ်တယ်။ ဆရာမတွေကလည်း ကြိုးစားဖို့ အားပေးခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ပါပါ တယ်။ ရအောင်လုပ် မျှော်လင့်ချက်ထားတဲ့ သူတွေမှာ မျှော်လင့်ရကျိုးနပ်အောင် သမီးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
သမီးဘယ်လောက်တောင် ကြိုးစားခဲ့ရသလဲ၊ ဘယ်လိုရင်းနှီးခဲ့ရသလဲဆိုရင် လူရည်ချွန်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူး လေ။ နောက်ပြီးတော့ ဒီလိုတောမြို့လေး၊ ပြည်မကြီးနဲ့ ဝေးခေါင်တဲ့နေရာမှာ ဗဟုသုတရအောင် မေးခွန်းတွေကို ဖြေနိုင်အောင် ဘယ်လို ကြိုးစားခဲ့သလဲ?
အဓိကအားဖြင့် ကျောင်းစာပါပဲ။ ကျောင်းစာတွေကို ကျက်တယ်၊ မှတ်တယ်။ ပြန်ဖတ်တယ်။ (ကြိုးစားရင်း)၂ စာတွေရလာတယ်။
လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ နောက်မျိုးဆက်သစ်ကလေးတွေကို အမှာစကားနဲ့ နိဂုံးချုပ်လေးပြောပေးပါ။
လူငယ်တွေဆိုတာ ကြိုးစားရင် ဘုရားတော်ဖြစ်နိုင်တယ်။ လူရည်ချွန်မပြောလိုပါဘူး။ လူကောင်းပြီးမှ လူတော်ဖြစ်ဖို့ အဲဒီအဆင့်ကို အရင်ကြိုးစားရမယ်။ ပညာတတ်ဖို့ထက် စိတ်ဓါတ်ကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကောင်းမှ စည်းကမ်းရှိမှာ။ စည်းကမ်းရှိမှ ပညာတော်မယ်။ စည်းကမ်းရှိရင် ပညာက အလိုလိုရလာမှာပဲဖြစ်တယ်။ ပညာတတ်ဖို့ဆိုရင် စာအုပ်စာပေတွေကို ဖတ်ရမယ်။ လူတော် လူကောင်းမဖြစ်တာဟာ ပညာ၊ ဗဟုသုတတွေ ခေါင်းပါးတဲ့အတွက် စာပေဗဟုသုတတွေခေါင်းပါးတဲ့အတွက် စာပေကို လေ့လာမှုအား နည်းတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒါတွေက အဓိကအားဖြင့် ပါဝင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ အခုလို အာရှသမ္မာတရားအသံလွှင့်ဌာနကလည်း လူငယ်ကဏ္ဍမှာ ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် သမီးကို ကျေးဇူး တင်ရှိပါတယ်။
အခုလို လူငယ်တယောက် လူရည်ချွန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ မိဘ၊ ဆရာ၊ ကျောင်းသားအားလုံးက တက်ညီလက်ညီ ကြိုးစားခဲ့လို့ အောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တဲ့ ရလဒ်ပါ။ ဒါကြေင့် နောင်အနာဂါတ် ကျွန်မတို့တိုင်းပြည်အတွက် လူရည်ချွန်၊ လူရည်မွန်တွေများများပေါ်ထွက်နိုင် ဖို့ ရည်ရွယ်ရင်း နိဂုံးချုပ်ပါတယ်။